Cartagena: Lahatsary iray isan’andro avy any Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2010 7:48 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, македонски, Italiano, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Saripikan'i Mario Carvajal arovan'ny CC
Nanapa-kevitra ny hanokana ny taona 2010 ho taonan'ny famahanam-bolongan-dahatsary ny vondrona mpamaham-bolongan-dahatsary avy any Kolombia, ka nanapa-kevitra ny hamoaka lahatsary iray isan'andro madritra ny taona 2010. Anio dia ireo lahatsary nofantenana hijerena ny tanànan'i Cartagena any Kolombia no entinay aminareo: Lovan'ny tany araka ny UNESCO ary toerana be mpitsidika indrindra araka ny Frommer's travel guides (Fitarihan-jahatany Frommer).
Tovovavy roa monina any Cartagena ary te-haneho ny tanànany amin'ny fijerin'ireo mipetraka any i Erika Pao sy i Luisa Santiaga, ary miezaka mba hamoaka ho any amin'ny mazava (ho hitan'ny rehetra) ny zavamisy sy ny toerana mahazatra any:
Teneno amin'ny alalan'ny lahatsary ny zavamitranga andavanandro sy ireo tantara manodidina antsika; ny tanjaka ara-kolontsaina sy ara-tsosialy izay nivoahantsika saingy tsy dia fantatry ny maro momba ny tanànantsika.
Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny fizahantany any amin'ity firenena ity ny tarigetran'izy ireo: Redaredam-pitiavana i Kolombia (Colombia is Passion). Saingy tsy vitan'ny hoe hita avy ety ivelan'ny firenena ny ezaka fa ezahina ampahatanjahina ihany koa ny hambom-pom-pirenena. Tahaka izany ity hetsika hampahafantarana an'i Cartagena ity: eo amin'ny kianja famantarana ny tanàna no ametrahan'izy ireo ny sary sokitra sy saripika mitaratra izany fampiroboroboana ny fizahantany izany. Ny hira ampiarahana amin'ny lahatsary moa dia ezaka eo amin'ny mpanakanto Kolombiana maro ao anatin'ny fanentanana antsoina hoe Colombia es Pasión:
ny 2 Janoary no andro filaharan'ny mpivavaka ho an'ny Virijiny, izay ianihan'ny katolika ho any amin'ny trano fitokana-monina miorina eo an-tampon-kavoanan'ny Papa ary itondran'izy ireo miverina an-tsoroka miara-milanja avy eo ny Virijiny ho eo amin'ny fiangonana eo ampototry ny havoana:
Ao Cartagena, akaiky ny Kianja fandraisana fiara fitaterana dia misy lalana misy fialofana izay nampiasaina ho toerana fividianana andevo. Nandritra ny faran'ny taonjato XIX, no nanombohana ivarotana zavatra mahafinaritra ny lela teo amin'io toerana io: vatomamy. Eo amin'ny Vavahadin'ny vatomamy no amidy ireo zava-mamy vokarina any amin'ny faritra: Voamadilo, voanio ary siramamy “gasy” (karazany an!).
Mbola misy ihany koa ny sarin'ny andavanandro eny ivelany, ao amin'ity lahatsary manaraka ity, ankizy tsy manao kiraro milalao baolina fandaka anaty arabe mamovoka andro mitataovovonana manodidina ny tanàna antsoina hoe “Mora Vary”.
Ireto lahatsary manaraka ireto indray dia miresaka sombin'ny sakafo misy any Cartagena. Voalohany, zava-pisotro natao tamin'ny vary, ronono ary zavamanitra, miaraka amin'ny voankazo (tsy fantatro fa muscade hoe), ronono voafintina, shokolà ary gilasy, soritan'ilay mpivarotra ho : Mafilotra, mahavoky sy manala hetaheta:
Sakafo nentin-drazana hafa any Cartagena koa ny “patacón pisao”, kiendiendy izay hohanina koa isaky ny misakafo. Entin'i Luisa Santiaga isika hijery ny fikarakarana azy manomboka amin'ny fanalana ny hodiny, fitetehana, famotsipotserana, fandomana ary ny fanendasana azy:
Ity lahatsary farany ity no mitondra antsika any amin'ireo toerana mimanda sy arabe misy ny fonenan'ny mipetraka ao,ny fivarotana ary ny fivezivezena manodidina:
Raha toa moa ianao te-hahita bebe kokoa an'i Cartagena amin'ny alalan'ny mason'izy mirahavavy ireto dia afa-manao famandrihana ao amin'ny Cartagena 365 page na manaraka ny @luisasantiaga sy ny @erikapao ao amin'ny twitter izay ilazan'izy ireo ny lahatsary navoakan'izy ireo farany.
Amin'ny lahatsoratra manaraka ianareo dia hitondranay lahatsary avy amina mpamaham-bolongan-dahatsary hafa mandray anjara amin'ity tetikasa 365 ity. Raha toa ianao mahalala mpamaham-bolongatsary dia manorata aty aminay aty amin'ny Global Voices? Miangavy anao izahay manorata aminay ary ampahafantaro anay izany!